Tijdens K.G. (2019) ြမန်မာြပည်တွင်း သင့်တင့်ေသာလုပ်အားခ ၂၀၁၉။ Amsterdam, WageIndicator ေဖာင်ေဒး􀇹ှင်း၊ 􀇳ိုဝင်ဘာ။ - WageIndicator.org
Tijdens K.G. (2019) ြမန်မာြပည်တွင်း သင့်တင့်ေသာလုပ်အားခ ၂၀၁၉။ Amsterdam, WageIndicator ေဖာင်ေဒး􀇹ှင်း၊ 􀇳ိုဝင်ဘာ။
Tijdens K.G. (2019) ြမန်မာြပည်တွင်း သင့်တင့်ေသာလုပ်အားခ ၂၀၁၉။ Amsterdam, WageIndicator ေဖာင်ေဒး􀇹ှင်း၊ 􀇳ိုဝင်ဘာ။ Tijdens K.G. (2019) ြမန်မာြပည်တွင်း သင့်တင့်ေသာလုပ်အားခ ၂၀၁၉။ Amsterdam, WageIndicator ေဖာင်ေဒး􀇹ှင်း၊ 􀇳ိုဝင်ဘာ။ in Burmese and English https://wageindicator.org/Wageindicatorfoundation/publications/publications-2019/tijdens-k-g-2019-103c10191014103a1019102c103c1015100a103a1010103d1004103a1038-101e10041037103a101010041037103a1031101e102c101c102f1015103a1021102c10381001-1042104010411049104b-amsterdam-wageindicator https://wageindicator.org/@@site-logo/wageindicator.png
Tijdens K.G. (2019) ြမန်မာြပည်တွင်း သင့်တင့်ေသာလုပ်အားခ ၂၀၁၉။ Amsterdam, WageIndicator ေဖာင်ေဒး􀇹ှင်း၊ 􀇳ိုဝင်ဘာ။ in Burmese and English
Access the full report in:
Burmese: Tijdens K.G. (2019) ြမန်မာြပည်တွင်း သင့်တင့်ေသာလုပ်အားခ ၂၀၁၉။ Amsterdam, WageIndicator ေဖာင်ေဒး􀇹ှင်း၊ 􀇳ိုဝင်ဘာ။
English: Tijdens K.G. (2019) Decent wages in Myanmar 2019. Amsterdam, WageIndicator Foundation, November.
၂၀၂၀ ခု􀇳ှစ်တွင် အ􀆱ပီးသတ်ရန်လျာထားေသာ ြမန်မာ􀇳ိုင်ငံတွင်း အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခအဆင့်သစ်များ ချမှတ်ြပင်ဆင်ရာတွင် ြမန်မာြပည်တွင်း သင့်တင့်ေသာလုပ်အားခ စီမံကိန်းအေန􀇳ှင့် လုပ်အားခ􀇳ှင့် ေနထိုင်စရိတ်ဆိုင်ရာ ေဒတာများေကာက်ယူ􀆱ပီး အလ􀈄ာလိုက်ရပ်ဝှမ်းများကို အပိုင်းသံုးပိုင်းပါေသာ ည􀋁ိ􀇳􀋪ိင်းေဆာင်ရွက်မ􀋪များ􀇳ှင့် အ􀆭ကံေပးမ􀋪များ ြပုလုပ်ေပးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ WageIndicator သည် ေရွးချယ်ထားေသာ လုပ်အားခနည်း လုပ်ငန်းများ􀇳ှင့် ေရွးချယ်ထားေသာ နယ်ေြမများမှ ေကာက်ယူရ􀇹ှိေသာ အဆိုပါ လုပ်အားခေဒတာများကို အစီအရင်ခံ တင်ြပပါမည်။
အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခ ဥပေဒ (၂၀၁၃) တွင် အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခကို ပင်စင်များ􀇳ှင့် ဆုေ􀆭ကးေငွများ၊ လူမ􀋪လံုြခံုေရး ေငွသားအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အလုပ်ရပ်နားခံရ၍ ရ􀇹ှိေသာ ေလျာ်ေ􀆭ကးေငွများ၊ ခရီးသွားစရိတ်၊ တည်းခိုေနထိုင်စရိတ်၊ စားေသာက်စရိတ်၊ လ􀈂ပ်စစ်မီတာ ေရမီတာများ􀇳ှင့် အခွန်များ၊ ကျန်းမာေရး ေဆးကုစရိတ်များ􀇳ှင့် အနားယူစရိတ်များ မပါဝင်ေသာ အေြခခံလစာအြဖစ် အဓိပ􀈧ါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခ ဥပေဒသည် ဌာေနတစ်ခုစီတွင် အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခဆိုင်ရာ သံုးပွင့်ဆိုင်ေကာ်မတီများ ဖွဲ􀋺စည်း􀆱ပီး အေြခခံ အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခများကို သုေတသနလုပ်တွက်ချက်ရန် အ􀆭ကံြပုထားပါသည်။ အဆိုပါေကာ်မတီများက ၎င်းတို့၏ အဆိုြပုချက်များကို တစ်􀇳ိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခ ေကာ်မတီသို့ တင်ြပပါမည်။ အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခအြဖစ် အကျံုးဝင်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများကို တစ်􀇳ိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခ ေကာ်မတီမှ ဆံုးြဖတ်ပါသည်။ ေကာ်မတီသည် အလုပ်သမားများ􀇳ှင့် ၎င်းတို့မိသားစုများ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ လက်􀇹ှိလစာ၊ လူမ􀋪လံုြခံုေရး အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ေနထိုင်စရိတ်တို့အြပင် သဟဇာတြဖစ်ေသာ လူေနမ􀋪အဆင့်အတန်း 01 တို့ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂၀၁၉ ခု􀇳ှစ် ဇွန်လ - စက်တင်ဘာလ အတွင်းတွင် ြမန်မာလုပ်ငန်းများ၊ လက်မ􀋪ပညာ􀇳ှင့် ဝန်ေဆာင်မ􀋪 အလုပ်သမားသမဂ􀈔များ အဖွဲ􀋺ချုပ် (MICS-TUsF) သည် Mondiaal FNV 􀇳ှင့် APHEDA Myanmar တို့၏ ပံ့ပိုးမ􀋪ြဖင့် အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခ သံုးသပ်ေရးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအတိုင်ပင်ခံဖိုရမ် (LCF) ကို ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖိုရမ်အား ြမန်မာ􀇳ိုင်ငံ ကုန်သွယ်ေရး သမဂ􀈔 (CTUM) 􀇳ှင့် ြမန်မာ􀇳ိုင်ငံ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူများအဖွဲ􀋺ချုပ် (AFFM-IUF) 􀇳ှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အေရး အဖွဲ􀋺များ စသည့် အလုပ်သမဂ􀈔 ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက်ခဲ့􀆭ကသည်။ MICS-TUsF က ပူးတွဲစည်း􀇸ံုးေရးအတွက် အနိမ့်ဆံုးလုပ်အားခစစ်တမ်းကို LCF ၏ ပလက်ေဖာင်းအြဖစ် လိုအပ်ေ􀆭ကာင်း တင်ြပခဲ့သည်။ စစ်တမ်းရလဒ်များကို သံုးပွင့်ဆိုင် လုပ်အားခေကာ်မတီတွင် လူမ􀋪ေရးေတွ􀋺ဆံုေဆွးေ􀇳ွးေရး􀇳ှင့် ည􀋁ိ􀇳􀋪ိင်းမ􀋪များအတွက် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များအြဖစ်လည်း အသံုးြပုသည်။ FNV Mondiaal သည် WageIndicator ေဖာင်ေဒး􀇹ှင်းအား ၎င်းတို့အေန􀇳ှင့် လုပ်ငန်းအေတွ􀋺အ􀆭ကံု􀇹ှိ􀆱ပီးသားြဖစ်ေသာ လုပ်အားခစစ်တမ်းတစ်ခု􀇳ှင့် ေနထိုင်စရိတ်အတွက် စစ်တမ်းတစ်ခုတို့ကို စီမံခန့်ခွဲေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ WageIndicator က စစ်တမ်းများအတွက် လိုအပ်ေသာ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်မ􀋪ကို ြပုလုပ်ရာတွင် ရန်ကုန်􀆱မို􀋺􀇹ှိ စီးပွားေရး􀇳ှင့် လူမ􀋪ဖွံ􀋺􀆱ဖိုးေရးစင်တာ (CESD) 􀇳ှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ဤ WageIndicator ေဒတာ ရီပို့တွင် ၎င်းစစ်တမ်းများ􀇹ှိ ရလဒ်များကို တင်ြပထားပါသည်။
Cite this page: © WageIndicator 2020 - WageIndicator.org - Tijdens K.G. (2019) ြမန်မာြပည်တွင်း သင့်တင့်ေသာလုပ်အားခ ၂၀၁၉။ Amsterdam, WageIndicator ေဖာင်ေဒး􀇹ှင်း၊ 􀇳ိုဝင်ဘာ။